Moldovia Tsy Misy Governemanta: Inona No Tohiny – Atsinanana sa Andrefana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2013 4:55 GMT
Ny 5 Martsa, nolanian'ny Parlemanta Moldavy ny fitsipaham-pitokisana, itsipahana [ro] ny governamanta fiaraha-mitantan'ireo antoko telo mankasitraka ny fiarahana amin'i Eoropeana, notarihan'i Vlad Filat, ilay filohan'ny Antoko Liberaly Demokraty. Avy amin'ny Antoko Kaominista , ny avy amin'ny Antoko Demokratika mpikambana ao anatin'ny fiaraha-mitantana sy ireo solombavambahoaka mahaleotena ireo vato 54 nanaiky ilay fitsipahana. Latsaka tao anatinà fiampangàna ho nanao kolikoly maro sy fifanenjehana lalina tao amin'ny samy mpitantana ny Alliance for European Integration (AEI) ny governemanta. Raha efa in-droa tany aloha tany no mbola mikaroka làlana hatrany hivoahana amin'ity fikatsoana ity ireo antoko telo mitambatra ao anatin'ny governemanta, nihevi-tena ho toy ny efa nandresy kosa ny Antoko Kaominista ary manantena mafy ny ho tafaverina eo amin'ny fitondràna.
Vlad Filat, ilay Praiministra voaongana. Sary avy amin'i Alexander Savinov, 2009 (CC BY-NC-SA 2.0)
Herinandro vitsy tany teo aloha teo, i Moldovia no tahaka ny fanantenana lehibe tany amin'ny sisintany Atsinanan'ny Fiombonambe Eoropeana.
Ankehitriny, mety ho lasa tafaverina ao anatin'ny lalaom-pahefana Rosia-Eoropa tsy hita fetra ilay firenena Sovietika teo aloha, sady mizotra mankany aminà krizy politika henjana. Ny Lalàm-panorenana dia milaza fa raha in-droa ny Parlemanta no tsy mahatafavoaka fifanarahana amin'ny hananganana governemanta vaovao ao anatin'ny 45 andro, dia horavana izy ka ary mety hiatrika fifidianana mialoha ny fotoana ny firenena, fomba fanao iray efa diso mateti-pitranga loatra tao anatin'ny tantaran'ilay firenena tanora.
Avy hatrany dia misy feo miainga avy any Bruxelles nangataka ireo sangany amin'ny politika ao Moldavia mba hanohy lavidavitra kokoa ny firotsahana hiara-dia amin'ny Fiombonambe Eoropeana.
Tahaka ny takatry ny tontolon'ny bilaogy ny zava-miseho any ambadiky ny sehatry ny antoko politika ka nitarika ny fialàn'ny kabinetran'ireo minisitr'i Vlad Filat.
Ao anaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe “Absurdistan” dia manoratra ity i Sorin Hadârcă :
Androany aho nipetraka nankafy nijery ilay fisehoana an-tsehatra “Ny Fionganan'ny Governemanta,” narindran'ny Antoko Demaokraty. Tohina amin'ny fihetsika feno fihantsiana ataon'ireo politisiana sasany aho, izay tsy misalasala manao sorona ny vitan'ireo Moldavy mba hahita fiainana mendrika kokoa mba hanafenany ny heloka bevava natao.
Ny mpanoratra dia manondro tantara ratsy iray, tsy ela akory izay, nipoaka [ro] rehefa injay ny Antoko Liberaly Demaokraty nangataka ny fialàn'ny Lehiben'ny Fampanoavana (olom-boatendry avy amin'ny Antoko Demaokraty), izay, niara-voarohirohy taminà olona ambony iray ao amin'ny governemanta tamin'ny fanafenana ny fahafatesan'ny tovolahy iray nifandray taminà tifitra nandritra ny fihazàna. Niafara tamin'ny hetsika fanaovana valifaty avy amin'ny Antoko Demaokraty izy ity, izay nanokatra fanadihadiana mikasika ny fanararaotam-pahefana nataon'ireo minisitra voatendry avy amin'ny Antoko Liberaly Demaokraty
Mitondra ireo andalana fieritreritra ireo ihany ho an'ny daholobe i Andrei Fornea. Hoy izy manontany [ro] :
Tena mino marina ve ianareo fa notsipahana ny governemanta satria tsy nahatontosa ny drafitr'asany, na satria làlana ratsy no mba nataony, na satria tsy nanondrotra karama na fisotroan-dronono? Mazava loatra fa tsia novaliny. Noho izany ny hany sisa tavela amin'izany rehetra izany dia ny hoe mampiseho ny tena fahaiza-manaony ireo olom-bitsy
Ireo mpanohana ny lalan-jotra fiarahana amin'ny Eoropeana dia mitandrina mafy amin'ny lahatrasan'ny fanavaozam-pirenena. Manoratra i Denis Cenușă [ro] hoe :
Sahala amin'ny tsy misy feo maharesy lahatra an'ireo olom-bitsy Moldavy mihitsy ka izay dingana rehetra natao dia mitondra 5-10 taona verivery foana indray ho an'ny fanavaozana sy firosoana ho aminà dingana iray mifanaraka amin'ny satan'ny firenena iray maniry ho ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana.
Atahoran'i Igor Casu [ro] tsy hahita ny làlan-kombany ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana i Moldavia :
… ny zavatra mety ho azon'ireo antoko telo mpikambana ao amin'ny AIE dia ny tsy hahita vokatra amin'ireo fifidianana alohan'ny fotoana, ary mitatra hatrany amin'ny mavesa-danja kokoa, dia ny Repoblika Moldavy manontolo no ho maty antoka, sy hitsingidina indray ao anati'ny faribolan'ny tombontsoa Rosiana, ary hanatodi-damosina aminy mandritra ny fotoana tsy voafetra ny Tandrefana.
Ny Vovonan'olon-tsotra “Acțiunea 2012″ dia niahiahy [ro] hoe ny Antoko Kaominista, izay nifehy ny firenena reo anelanelan'ny 2001-2009, dia mety ho tafaverina eo amin'ny fitondrana :
Izay governemanta Kaominista mety ho tonga eo dia hiditra amin'ny politika mifanohitra amin'ny tombontsoan'ny vahoaka ao amin'ny Repoblikan'ny Moldavia, anaovana fotsiny izay hamiliviliana ny fironan'i Chișinău amin'ny Eoropeana ho an'ny amin'ny tsy fahombiazana jeopolitika.
Mino [ro] i Nicolae Ciobanu fa ny hany vahaolana dia ny fisian'ny mpitarika iray vaovao:
Mila mahery fo iray isika izay afaka hametraka filaminana tanteraka eto amin'ity firenena ity, mahery fo iray afaka hanafaka ny vahoaka mahantra izay nangalatra zavatra bitika tsy ho any am-ponja, mba hahafahan'izy ireny mamelona ny ankohonany, ary hameno [ireny fonja ireny] amin'ireo mpitondra ratsy fanahy sy mpamitaka, izay misy betsaka izy ireo, diso betsaka loatra aza ho an'ity firenena kely ity. Mila mahery fo iray isika hitondra an'ity firenena ity hivoaka amin'ny fahapotehana sy hilahatra amin'ireo firenena mandroso.
Izao zavatra iray izao no mazava : ireo olom-pirenena, eny an'arabe na ety anaty aterineto, dia leo mijery ireo politisiana mamerimberina ny hadisoany.
Manoratra i [ro] Andrei Cibotaru, mpanao gazety sady bilaogera :
Nandraman'ity Fiaraha-mitantana ity daholo ny zavatra rehetra: fifidianana mialohan'ny fotoana, fitsapankevi-bahoaka, olana momba ny raharaha maha-filoham-pirenena, ny algôritma, ny fitsipahana fitokisana… Heveriko fa tsy nisy na iray aza hatreto olona nanandrana tsingeringerina tahaka izany tao anatin'ny politika Moldavy. Raha mbola izay indray no hatsangan-dry zareo amin'ny maty indray mandeha indray, dia ho resy lahatra mandra-pahafatiko aho fa izaho mihitsy no faran'izay kentrina amin'ny raharaha politika.
Taorian'ny nialàn'ny governemanta, ny fanehoankevitra voalohan'ireo Moldavy mpanao gazety, tao amin'ny Facebook, dia tsy namelom-panantenana loatra ihany koa.
Nanoratra [ro] i Viorel Mardare hoe :
Fony aho niditra tao an-trano fandroako, mbola nisy governemanta teo. Nivoaka ny trano fandroana aho – efa niala ny governemanta. Rahampitso aho izao efa matahotra ny hisasa.
Nanoratra [ru] i Daria Gvindjia hoe :
Izay izany, fotoana mazava tsara izao hialàna. Raha azoko natao ny nanipy tena hivoaka ity firenena ity, dia nataoko. Noho ny antony tsy haiko loatra, dia nanjary lasa tena tsy tia tanindrazana aho.
Nitanisa [ro] ny nataon'ny zanany vavy 10 taona i Lina Grau:
Ny zanako vavy, 10 taona, taorian'ny nanazavako izay mitranga eto amin'ny firenena : “Tsy takatr'ireny olona ireny ve fa raha miady ry zareo, ny firenena manontolo no mijaly?”